downloads 52 135
Full ndepụta ke mkpọ
Auto-installe emelitere ka mbipute 10 na ndakọrịta na FSX Ntan Steam na Prepar3D vx
Nke a bụ ụgbọ elu Royal Air Maroc zuru ezu (Ram) gbakwunyere ụgbọ mmiri Atlas-Blue na Jet4you maka FSX. Emepeela mkpọ a maka arụmọrụ kachasị na FSX. Ego ndozi asatọ (tinyere anọ ndị ọzọ) dịka ezigbo enwere ike ịkere ha maka mkpọ a. Ihe ndekọ ụgbọ elu RAM na 2012 bụ ụgbọ elu isii nke ụgbọelu, atọ maka Atlas-Blue maka ụgbọ mmiri abụọ na abụọ maka Jet4you. Modelsdị ndị a niile dị na ngwugwu a na nrụpụta metụtara ya.
na FSX ndepụta nke onye nrụpụta ihe maka "Royal Air Maroc"Ma ọ bụ"Atlas-Blue.com"Ma ọ bụ"Jet4you.com"Gosipụta dị ugbo elu.
A ọtụtụ n'ime ndị a ụgbọ elu na- dakọtara na DirectX 10, ọ dị mkpa iji gbanyụọ atụmatụ a FSX, ma ọ bụrụ na ịmaghị etu ị ga-esi kelee gị maka ịgụ ihe ndị a FAQ.
Airbus A321-211 (New agba) + VC
Boeing 737-400 (New agba) + 2D ebi ndụ
Boeing 737-800 (New agba) + 2D VC
Onye edemede: Ndepụta zuru ezu na mkpọ